5 sir oo ku saabsan sida ninka raga ah qalbigiisa uu kugu furi karo
Home Hoyga Nolosha Shantan arrimood haddii aad sameyso ninkaaga qalbigiisa ayuu kuu furayaa
Shantan arrimood haddii aad sameyso ninkaaga qalbigiisa ayuu kuu furayaa
Maxay tahay sirta kuu fududeyneysa in seygaaga uu kula wadaago waxkasta oo sirtiisa ah?
Qoyska wuxuu ku dhismaan in daacad la isu noqdo - Maanfur
“Ma garanayo waxa uu ka fakarayo sababtoo ah weligii iima sheegin waxa uu damacsan yahay.” Hadalkaas kuguma cusbo soo ma ahan?
Baaritaan dhowaan la sameeyay waxaa lagu ogaaday in 42% dumarka in ay dareemayaan in seygooda uu ka qariyo waxa uu niyadda ku hayo.
Marka taa ay dhacdo, iyada waxay dareemeysaa in sirtiisa uu ka qarsaday, isagana wuxuu dareemayaa in si xun loo fahmay.
Haddaba, waxaa la ogaaday in ragga ay doonayaan in ay hadlaan. Balse waa in ay tahay xilliga saxda ah iyo xaaladda dhabta ah ee jirta.
Inta badan ragga ma jeclo culeys badan. Haddaba maxay tahay sirta kuu fududeyneysa in seygaaga uu kula wadaago waxkasta oo sirtiisa ah? Halkan ka akhriso jawaabta:
Sirta 1: Ragga dhabta ah way ka baqaan in la deyriyo — Ma dhabbaa taa?!
Waa run. Ragga intooda badan waxay dareemayaan in xaasaskooda yihiin ceeb raadis ba’n. Waxayna ka walwalayaan in haddii sirtooda ay u sheegaan in lagu qoslo, laga tago ama la ceebeeyo.
Haddaba waxaa muhiim ah in dumarka ay fahmaan sida wayn ee ay ragga isu arkaan iyo in ay doonayaan in la aqoonsado – Arrimahaas na waa kuwo si fudu ku dareemi kara in la soo weeraray.
Haddaba, markuu ninka dareemo in aad u muujineyso sida aad u aragto ee aan fiicnayn, ama aad ku eegto il aan wanaagsanayn ka dib marka uu hadal sheego, waxaa hadaba xaqiiqo ah in uusan kula hadli doonin.
In aadan waxa ay kula tahay ka sheegin ama u muujin seygaaga waxay taa micneheedu tahay in uu qalbigiisa kuu furo, ka dibna sidaa doonto uga adeegato – sir uu kaa qarsan doono ma jirto.
Si fiican u baro si aad u ogaato xilliyada uu daalan yahay, murugeysan yahay, shaqada ku soo xanaaqay, niyadjabsan yahay iyo marka uu wax ka walwalayo. Taa waxay kuu fududeyneysaa in aan marba si ula dhaqanto.
Ka dibna waxaad heleysaa fursad aad sirtiisa oo dhan ku ogaato – riyo iyo runba.
Sirta 2: Adigana waxba ha ka qarsan
Waa in aysan waxba iska qarsanin lamaahana is qaba. Nolosha ayaaba ah in qofkasta uu dhib haysto; ama uu wax uun ka baqayo.
Rag badan waxaa niyaddooda ku jira, “haddii aan arrintan u sheego, way iga tagi doontaa.” Haddaba waa in ragga xitaa ay sheegaan in arrinta ay shaaca ka qaadayaan aysan ahayn mid fudud, ayna labada dhinacba runta is weydaarsadaan si aaminaadu u badato.
Marka uu billaabo in uu isu kaa furfuro, si deggan uu fiican u dhageyso ka dibna jawaab wanaagsan oo lab qabowsi ah sii.
Marka uu kuu sheego arrin shaqsiyadeed, u sheeg in aadan ka xumayn ama arrintaa aysan dhib ahayn.
Haddii wax ku deyasho iyo bogaadin mudan uu kuu sheego, waa in aad ammaantaa, ka dibna taada u sheeg. Xusuusi in aad isku mid tihiin oo isaga aad ku koox tahay, aadna taageersan tahay.
Sirta 3: Iska hilmaam wixii tagay (Wax tagay tiigsimaad ma lahan)
Weligaa ma dhacday in lamaanahaaga aad la yeelatay wada hadal ku dhammaaday xusuusta wax horey looga soo gudbay oo sababay isku dhac xun.
Khaladaadkii uu sameeyay, sida uu kuu dhaawacay niyad ahaan, iyo waxa hadda aad ka mudan tahay – dhammaan ma noqdeen doodad.
Way ka dhex dhacdaa laba qof oo kasta ee is qaba – balse xaqiiqada waxay tahay in ragga way gariiraan marka ay arkaan in arrintaas ay soo socoto.
Haddaba awood u yeelo in aad iska cafiso kana gudubto waxyaabaha qaar ee dhacay sannad ka hor oo ay suuragal tahay in aysan run ahayn.
Waxaad diiradda saartaa waxa xilligaa taagan, xalkooda, ammaantooda iyo sidii looga gudbi lahaa dhib haddii uu jiro.
Wada hadalka dhabta ah wuxuu u baahan yahay awood ah in laga hadlo waxa xilligaa taagan – iskana ilawo wixii ku soo dhaafay ee laga soo gudbay.
Sirta 4: U dhageyso si fiican oo faham leh
Is dhegysiga wanaagsan wuxuu keenaa xiriir daacadnimo ah oo waqti dheer jira. Balse filashadu waa in qof kasta daacad yahay. Runtu se waxay tahay in dad yar laga helo daacadnimo.
Sababka keeneyso in dadka qaar ay daacadnimada iska daayaan waa iyagoo ka baqaya dhibaatada way nee ka dhalaneysa haddii runta ay sheegaan.
Rag badan waxay u haystaan in dumarka ay tahay in been uun loo sheego, sababtoo ah ma xamili karaan runta iyo daacadninmada.
Haddii aad dooneyso in xaqiiqada aad soo taabato, waa in aad runta dhageysataa oo si fiican u fahamtaa, adigoon six un ama xanaaq ah uga falcelinin.
Inta uu dulqaadkaagu la eg yahay iyo inta aad sii dhageysan karto runta waa muhiim, si daacadnimo loo helo.
Ma dooneysaa in seygaaga uu ahaado mid markasta faraxsan, mise dooneysaa in uu kuu noqdo nin dhab ah? Haddaba dhageysiga wanaagsan iyo dulqaadka waa muhiim.
Sirta 5: Naftaada ka adkow runta u sheeg — noqo qof naftiisa garanaya
Waa hadal wayn oo muddo la adeegsanayay, waana mid qiimo leh. Sidee qof kale runta ugu sheegeysaa, haddii naftaadaba aadan runta u sheegi kari n oo aadan ka adkeyn?
Waddada ugu fiican ee ninkaaga uu isugu kaa furfuri karo kuna ogaan karto sirtiisa waa marka hore adiga aad daacad u noqoto naftaada. Waa in aysan iyada ku hagin ee waa in adiga aad hagtaa.
Haddaba in aa dog tahay oo aad ka warhayso naftaada waa muhiim. Haddii aad dooneyso in waddo fiican aad ka dhex furto adiga iyo seygaaga, marka hore si wanaagsan u eeg qaabka aad ula dhaqmeyso ayna tahay naftaada.
Haddii lagu dhaawaco niyad ahaan, adiga ayey kuu taallaa haddii aad go’aansaneyso in noloshaas aad ka dhex bexeyso iyo in kale, balse taa waxay ku xiran tahay in naftaada ay og tahay waxa aad dooneyso iyo in aad runta u sheegto.
Ugu dambeyn: Haddii runta aad u sheegto naftaada, waxaad arki doontaa faa’iido badan iyo in dadka aad si wanaagsan ula dhaqanto. Waxaa kordhaya kalsoonidaada iyo sida wanaagsan ee seygaaga aad u dhageysaneyso.
Haddii taa lagaa waayo, si dabiici ah ayey dadka oo dhan uga fogaanayaan noloshaada – waxayna aadayaan meel u haboon. Xitaa seygaaga marka uu dulqaadkiisa dhammaado, wuu kaa tagi doonaa.
Haddaba qodobbada si fiican u akhri, iskuna dey in aad ku dhaqanto.
Previous articleSidee qof jaceyl daran ugu abuuri kartaa – si uusan weligii kaaga tagin (Sirta cilmu-nafsiga)
Next articleKa fogow seddaxdan qof ee leh dabeecadahan